4Wth ဗဓေလသစ် Blank က PCB ဘုတ်အဖွဲ့ပလပ်အလွှာ 1.6mm Flex ကိုတင်းကျပ် immersive ရွှေ 2u " - Wth ဗဓေလသစ် Blank က PCB ဘုတ်အဖွဲ့ပေးသွင်းပလပ်တရုတ် 4layer 1.6mm Flex ကိုတင်းကျပ် immersive ရွှေ 2u ",စက်ရုံ -WMD
နေအိမ် » ထုတ်ကုန်များ » Flex ကိုတင်းကျပ် PCB
4Wth ဗဓေလသစ် Blank က PCB ဘုတ်အဖွဲ့ပလပ်အလွှာ 1.6mm Flex ကိုတင်းကျပ် immersive ရွှေ 2u "
လေဟာနယ် အထုပ်,20pnl / အိတ်
4 အလွှာ Flex ကို- တင်းကျပ်ဘုတ်အဖွဲ့
130*235မီလီမီတာ / 1pcs
Coverlay, အစိမ်းရောင် Soldermask
တင်းကျပ် Flex ကို
ဖန်မျှင်ထည် Epoxy, FR4 PI
4အလွှာ Flex ကို - တောင့်တင်းသော
4 အလွှာ PCB, ပစ္စည်း FR4 PI ဖြစ်ပါတယ်, အထူကြေးနီ 1oz ဖြစ်ပါတယ် 1.6mm ပြီးဆုံးဖြစ်ပါသည်, မျက်နှာပြင်ကုသမှု "immersive ရွှေ 2u ဖြစ်ပါသည်, အစိမ်းရောင် soldermask နှင့် coverlay. အဆိုပါလိုင်း width နဲ့အာကာသကျဉ်းမြောင်းဖြစ်ပါသည်, ဗဓေလသစ်နှင့်အတူပလပ် VIAS.
တင်းကျပ်-Flex ဆားကစ်တစ်ခုတည်းဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံသို့အတူတကွ laminated ထားတဲ့တင်းကျပ်နှင့်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်အလွှာပါဝင်သည်ဟုတစ်စပ်ဆောက်လုပ်ရေး Flex ဆားကစ်တွေဟာ. တင်းကျပ်-Flex PCBs display ကိုအပါအဝင်မျိုးစုံ PCB အသင်းတော်များနှင့်အခြားအစိတ်အပိုင်းများကိုပေါင်းစပ်ဖို့ရိုးရှင်းတဲ့နည်းလမ်းများကို, ပါးလွှာနှင့်အတူ input ကိုသို့မဟုတ်သိုလှောင်ရေးကိရိယာ, ပါးလွှာထဲမှာဝါယာကြိုးပေါင်းစည်းကြောင်းအလင်းဖွဲ့စည်းမှု, ကဏ္ဍများအကြားပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ဖဲကြိုး. တင်းကျပ် Flex ကို၏ကြီးစွာသောအားသာချက်တစ်ခုမှာ device ကိုမဟုတျဘဲအခြားလမ်းပတ်ပတ်လည်မှအဆင်ပြေအောင်ခံရဖို့ရှိသည်လိမ့်မည်ဟုတိုက်နယ်ဒီဇိုင်းများ၏ဖြစ်နိုင်ခြေဖြစ်ပါသည်, တိုက်နယ်အဆိုအရကိရိယာ၏ထို့ကြောင့်ဆောက်လုပ်ရေး, တကယ်တော့သူတို့ကစွမ်းဆောင်ရည်အတွက်လျှော့ချရေးခြင်းမရှိဘဲသိသာငွေစုပေးဝါယာကြိုးများနှင့်ရှုပ်ထွေးစည်းဝေးပွဲကိုအစိတ်အပိုင်းများကိုအစားထိုးနိုင်ပါတယ်.
များစွာသော application များအတွက်, တင်းကျပ် circuit ကိုပျဉ်ပြားရနိုင်သည့်နေရာများတွင် fit သို့မဟုတ်စုဝေးဝန်ဆောင်မှုများအတွက်လိုအပ်သောပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ပေးမည်မဟုတ်. သည့်အခါပါးလွှာဤသူကားအ, ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ် PCB \_ 's အသုံးပြုကြသည်. ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ် PCB ရဲ့ကျယ်ပြန့်ခြင်းနှင့်အောင်မြင်စွာလေကြောင်းအတွက်အသုံးပြုကြသည်, ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ, မော်တော်ယာဉ်, တယ်လီကွန်မြူနီကေး, စစ်ရေး, စားသုံးသူအီလက်ထရောနစ်နှင့်အခြားထုတ်ကုန်များ. ပိုပြီးစျေးကြီးထုတ်လုပ်ပေမယ့်, ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ပုံနှိပ်ဆားကစ်ဘုတ်၏ဘက်စုံ, ရိုးရှင်းတဲ့ applications များအနေဖြင့်အရှုပ်ထွေးဆုံးဖို့, ပွိုဖြစ်ပါသည်.
ul IPC လမ်းညွှန်ချက် 4-Layers နီမှင် PCB ရိုးရှင်းသောနှစ်ချက် Panel ကို FR4 TG150 1/1/1 / အောင်စ 1.6mm PCB ENIG 2U "စာရင်းပေါက်
စံ PCB FR4 TG1352အလွှာ PCB 1oz LF HASL အနိမျ့ကုန်ကျစရိတ်မြင့်မားသောအရည်အသွေး Unclad Printed circuit board
ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ဘုတ်အဖွဲ့2FR4 မာကြောနှင့်အတူအလွှာ ENIG 1oz PCB
4 တရုတ်ဘီဗဲလ် Edge Chamfer မှစ. အလွှာ ENIG ရွှေလက်ချောင်းများ Multilayer PCB စက်ရုံ